သတင်းထောက်များ Beats အဖုံးဖုံးလိုက်တဲ့အခါသူကအဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနညျး
တစ်ဦးကစည်းချက်သတင်းထောက်ကိုဖုံးသောတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်အများစုမှာဂျာနယ်လစ် ပုံနှိပ် နှင့်အွန်လိုင်းသတင်းအဖုံးစည်းချက်။ တစ်ဦးက သတင်းထောက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးကာလများအတွက်အထူးသဖြင့်စည်းချက်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။
အခြေခံအကျဆုံးစည်းချက်၏အချို့သတင်းအပိုင်း၌ပါဝင်သည် ရဲများက , တရားရုံးများ , မြို့ကအစိုးရနှင့်ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ ။ အဆိုပါအနုပညာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအပိုင်းမှာလည်းရုပ်ရှင်၏လွှမ်းခြုံအပါအဝင်စည်းချက်သို့တက်ခွဲခြားနိုင်ပါသည် တီဗီ ဒါရက်နေ့တွင်, ဖျော်ဖြေအနုပညာနှင့်။
အားကစားသတင်းထောက်တွေကို မဟုတ်ဘဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ဒါပေါ်မှာဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, ဘေ့စ်ဘောနှင့်တူသောတိကျတဲ့စည်းချက်မှတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားဌာနခွဲများရှိဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့သတင်းအဖွဲ့အစည်းများ, The Associated Press , ထိုကဲ့သို့သောလန်ဒန်, မော်စကိုနှင့်ပေကျင်းအဖြစ်အဓိကကမ္ဘာကြီးမြို့တော်ထဲမှာတပ်စွဲသတင်းထောက်တွေကိုရပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ပိုပြီးထမ်းတွေနဲ့ပိုကြီးတဲ့စာတမ်းများပေါ်တွင်စည်းချက် ပို. ပင်တိတိကျကျရနိုင်။ ဥပမာ, စီးပွားရေးသတင်းအပိုင်းထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်နည်းပညာနှင့်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သီးခြားစည်းချက်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သိပ္ပံကဏ္ဍများကိုထုတ်လုပ်ရန်တတ်နိုင်သည်ဟုသတင်းများဆိုင်များတွင်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ဇီဝနည်းပညာကဲ့သို့သောလယ်ကွင်းကိုဖုံးလွှမ်းသောသူကသတင်းထောက်များကိုရိုက်နှက်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးစည်းချက်သတင်းထောက်ဖြစ်ခြင်းမှအတော်ကြာအားသာချက်များရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာစည်းချက်သတင်းထောက်တွေကိုသူတို့အကြောင်းကိုအများဆုံးအသည်းအသန်ဖြစ်ကြ၏ဘာသာရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်ခွင့်ပြုပါ။ သငျသညျရုပ်ရှင်ချစ်ကြလျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းမှာကြုံရတဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်း ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖုံးလွှမ်း။
သင်တစ်ဦးကနိုင်ငံရေး junkie နေလျှင်, ဘာမျှမသင်ဒေသခံ, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာနိုင်ငံရေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ထက် ပို. ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
လည်းစည်းချက်ဖုံးအုပ်သင်တစ်ဦးခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။ မဆိုကောင်းသောသတင်းထောက်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှုဇာတ်လမ်းထွက် bang သို့မဟုတ်တစ်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါတယ် တရားရုံးတွင်ကြားနာ ပေမယ့်အတွေ့အကြုံရစည်းချက်သတင်းထောက်ကြောင်းအရင်ကဆိုရင်မဖြောင့်လိမ့်မည်တစ်လမ်းထဲမှာ ins နှင့်တနေရာကိုသိပါလိမ့်မယ်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်း၏အဆင်မပြေတဲ့စည်းချက်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီး boring ရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အယ်ဒီတာများမကြာခဏလတ်ဆတ်သည့်လွှမ်းခြုံထားရန်အလို့ငှာတစ်ဝှမ်းကသတင်းထောက်များကိုအကူးအပြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောသတင်းထောက်တွေကိုတစ်စည်းချက်ဖုံးအုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြုန်းပြီးနောက်, ရှုခင်းနှင့်အသစ်စိန်ခေါ်မှုများတစ်ပြောင်းလဲမှုတပ်မက်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ - - အစီရင်ခံသတင်းစာများခွဲခြားသောအရာကိုလည်းဖြစ်ပါတယ် Beat ထိုကဲ့သို့သောဒေသခံတီဗီသတင်းအဖြစ်မီဒီယာ၏အခြားပုံစံများကနေ။ အများဆုံးထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းဆိုင်များတွင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့-staffed သတင်းစာများ, သတင်းထောက်များကိုများသောအားဖြင့်တီဗီသတင်းပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရဲ့အဘယ်အရာထက်ပိုပြီးနှံ့နှံ့စပ်စပ်နှင့် In-depth ရဲ့လွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ရန်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။
ဂျာနယ်လစ်ရည်ရွယ်ချက် Be ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားကိုပြောပြပါသငျ့သလော
တစ်သတင်းထောက်အဖြစ်မှန်ကန် Attribution အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
တစ်ဦး Feature ကိုပုံပြင် Is ဘာသင်ယူ
Journos အဲဒီအခမဲ့တည်းဖြတ် Programs ကိုအတူဗီဒီယိုသတင်းအစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးနိုင်မလား
လျင်မြန်စွာသတင်းပုံပြင် Edit ရန်သင်ယူခြင်း
အဘယ်ကြောင့်လူငယ်များအသတင်းများ Read မဟုတ်လော
သင်ကဘွဲ့ရဲ့ဘွဲ့တစ်ခုသတင်းစာပညာယောဘသည် Get ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
တစ်ဦးကပိုကောင်းရေကူး Be ရန်လိုပါသလား? ထို့နောက်နောက်ထပ်မကြာခဏကူး!
အဆိုပါ LD50 စမ်းသပ်ခြင်းကဘာလဲ?
ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်တစ်ဦးပျက်ကွက် Engine ကိုတောင်အစားထိုး
နှစ်ချက် Displacement တုံ့ပြန်မှုအဓိပ္ပာယ်
ဖါရောဘုရငျ Thutmose III ကိုနှင့်မေဂိဒ္ဒေါ၏တိုက်ပွဲ
'' Entender '' vs. '' Comprender ''
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS Lexington (CV ကို-16)
မတော်တဆပြတိုက်မှာသူတို့ရဲ့ Doppelgangers တွေ့သည်အဘယ်သူသည်အသက် 25 ပြည်သူ့
ထိပ်တန်း 10 Burt Bacharach နှင့် Hal ဒါဝိဒ်သည်သီချင်းများ
အောက်ပိုင်း Voice ကိုအသံနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ပိုအာဏာပိုင်ဖူး, မဟာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်သလား?
Ohalo II ကို - ဂါလိလဲအိုင်ပေါ်အထက် Paleolithic ဆိုက်ကို
ကျွမ်းဘားအားကစားအတွက် aa ပြည့်ခုနှစ်တွင်အသိအမှတ်ပြုလုပ်နည်း
Dark matter ရီးရဲလ်လား?
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်မှူးချုပ်ရောဘတ်အိပ်ချ် Milroy
US မှာ 15 က Black အမေရိကန်ဗိသုကာပညာရှင်များ
'' အဆိုပါပုလဲ '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦးဘုနျးကွီး Wolf ကကိုခပ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင် Timeline ကို: 1972
Archaism (စကားနှင့် Syntax)
Fogging မှစ. ကိုယ်တော်၏ Paintball မျက်နှာဖုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်ကဘယ်လို